Cabdiraxman Cabdi Shakuur oo si kulul ugu jawaabay Celiyey Sheekh UMAL. – Kismaayo24 News Agency
Cabdiraxman Cabdi Shakuur oo si kulul ugu jawaabay Celiyey Sheekh UMAL.
by admin 6th December 2019 0195
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa jawaab ka bixiyey hadal uu xalay jeediyey Sheekh Maxamed Cabdi Umal, kaasi oo uu kaga jawaabay hadalkii muranka dhaliyey ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ka sheegay dalka Jarmalka. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa jawaab ka bixiyey hadal uu xalay jeediyey Sheekh Maxamed Cabdi Umal, kaasi oo uu kaga jawaabay hadalkii muranka dhaliyey ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ka sheegay dalka Jarmalka.
Hoos ka aqriso jawaabta Cabdiraxmaan Cabdishakuur
Wuxuu igu tilmaamay: “Jaahil, eey oo kala ah, gaalo raac, Nebi diid ah, Diinta ka xuubsiibtay, dumarka cod si khiyaano ah uga raadsanaya.
Wuxuu Umal shacabka Soomaaliyeed ku eedeyey in ay raggii soo qixiyay xukunka ku abaal mariyeen, oo ay madax ka dhigteen. Waxaa uu kaloo sheegay in kuwo aan anigu ka mid ahay ee soo socdana ay gaalo raac yihiin.Wuxuu Umal shacabka Soomaaliyeed ku eedeyey in ay raggii soo qixiyay xukunka ku abaal mariyeen, oo ay madax ka dhigteen. Waxaa uu kaloo sheegay in kuwo aan anigu ka mid ahay ee soo socdana ay gaalo raac yihiin.
Somaalida ku nool Dalka Uganda oo ka cabanaaya tuugo boob iyo jirdil ku heysa.
Dalka Koofur Afrika oo loogu geystay dhac iyo boob baahsan Ganacsato Soomaaliyeed.
admin 15th August 2019
Xog: Siilaanyo oo dowlada Imaaraadka ula tagay arrin uu sumcad darro kala soo kulmay!!!
admin 12th June 2015 27th August 2015
Dhageyso: Dhulboob Xoogan oo ka socda Magaalada Muqdissho.
gurey 30th November 2017